Mustafe Shabac ” Tiro koobka shaqaalaha waa mid cadaalad ah loo hubiyey” (SAWIRO) – PuntlandNews24
Mustafe Shabac ” Tiro koobka shaqaalaha waa mid cadaalad ah loo hubiyey” (SAWIRO)
Dhawaan ayey aheyd markii si rasmi ah ayay dawladda Puntland u Daahfurtay tiro koob rasmi ah oo lagu sameyn doono Shaqaalaha rayidka ah ee dawladda, waxaana kulan ay ka qeybgaleen Madax kasocota Madaxtooyada, Wasaaradda Sh/Shaqaalaha, Guddigu Dibu habeynta Shaqaalaha & Bangiga Aduunka ayaa ka dhacay Garoowe.
Madaxda dawladda Puntland ayaa ka sheegay madashan in ay talaabadan tahay mid bogaadin mudan, oo la tiro koobi doono Shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Puntland, ayna heli doonan Xaquuqahooda.
Gudoomiyaha Hay`adda Shaqaalaha Puntland Mustaf Siciid Shabac oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in Shaqaalaha la tiro koobi doono, ayna qeyb ka tahay barnaamijka dawladda ee dibu habeynta Shaqaalaha oo dhan.
Mr, Shabac wuxuu sheegay in si cadaalad ah loo gali doono tiro koobkan, isagoo mar kale hoosta ka xariiqey in ay dawladda Puntland, gaar ahaana guddigoodu ku shaqeynayaan nidaam hufan oo la hubiyey.
Hanti Dhowraha guud ee dawladda Puntland Jaamac Maxamed Cismaan oo ahaa Shaqsigii lagu bilaabay tiro-koobka ayaa bogaadiyey talaabada ay iska kaashanayaan Bangiga Aduunka & Guddigu Dibu habeynta Shaqaalaha dawladda.
Agaasimaha Madaxtooyada dawladda Puntland Abdinaasir Biixi Soofe ayaa cadeeyey in Xaquuqda Shaqaalaha la ilaalin doono, oo aysan jiri doonin cid lagu tumanayo Xaquuqdooda, isagoo guddigana kula dardaarmay in ay ilgaar ah ku eegaan Xaquuqda dadka howlgabka ah.
Wasiirka Shaqada & Shaqaalaha ee dawladda Puntland Cabdiraxmaan Sh Axmed Cabdulle ayaa ka sheegay kulankan in dhamaan kooxaha ka socda Guddiga Dibu habeynta Shaqaalaha dawladdu ay tagi doonaan dhamaan degmooyinka dalka ee ay joogaan shaqaale, isla markaasna ay soo tiro koobi doonan.
Guddiga Dibu habeynta Shaqaalaha dawladda Puntland ayaa shaqo xoog leh qabtay iyo markii la bilaabay in ay la shaqeeyaan Mashruuca Bangiga Aduunku ku taageerayo dawladda Puntland.
M/weynaha Somalia oo ku sii jeeda dalka Turkiga
Maxaad kala socotaa sidii la yaabka lahayd ee loo qabtay Abdala Oclan?